Mmetụta anyị - Bromley, Lewisham & Mindwich Mind
Ị nọ ebe a: Mbido > Gbasara anyị > Mmetụta Anyị
Ghọta ihe dị iche anyị na-eme na ndụ ndị mmadụ dị anyị oke mkpa, ọ bụ ya mere anyị ji arịọ mgbe niile maka nzaghachi n'aka ndị ọrụ na ndị ahịa anyị.
Anyị na-eji usoro nyocha na nlekota siri ike iji kpokọta echiche ma jiri nzaghachi iji melite ọrụ na-aga n'ihu.
Akaebe na ọrụ anyị nwere ike hụrụ na ibe ọrụ na weebụsaịtị a ma kwa afọ anyị mepụtara otu nyocha kwa afọ, nke na -egosipụta ụfọdụ n'ime isi ihe anyị rụzuru n'afọ. Na nyocha kwa afọ ị nwere ike ịchọta ozi gbasara ọrụ ọ bụla n'ime BLG Mind, yana nzaghachi sitere n'aka ndị ọrụ ọrụ yana ọnụ ọgụgụ ndị riterela uru n'otu ọrụ.
Anyị akụkọ kwa afọ na-egosikwa ụfọdụ ihe anyị rụzuru ma na-ewetakwa akụkọ ndị ahịa maka ọrụ ọ bụla, na-agbada nkwado nke ọrụ ahụ na ọdịiche dị na ndị mmadụ na ezinụlọ.
"Amụtawo m ọtụtụ ihe banyere onwe m"
“Ọ na-emeghe anya. Amụtala m ọtụtụ ihe banyere onwe m, m na-elekwa ndụ anya n'ụzọ dị iche. ”
"E nyere m oge m chọrọ"
"E nyere m oge m kwesịrị iweghachi / ghọta ihe."
"Ọ bụụrụ m ezigbo ndụ."
“M na-atụ anya otu Arts na Crafts otu. Ọ bụụrụ m ezigbo ndụ ma nye m ndụ mmekọrịta ọzọ; ndị enyi mụ na ha ga-apụ mgbe ọtụtụ afọ nke ịraparaghị n'ime ụlọ. ”
Kedu ka anyị si abịaru nnabata
Debanye maka akwụkwọ akụkọ anyị